Author: Sak Fet
Shuruudaha Xubnaha Qod. Marka uu fadhiisan waayo laba kal-fadhi oo caadiya oo isku xiga, iyadoo aanay keenin duruuf awoodooda ka baxsani.
Hadiyadaha la siiyo Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha iyo Marwooyinkooda iyo Madaxda sare ee Qaranka ee Ieh muuqaal Qaran iyada oo lagu maamuusayo xilka ay hayaan waxa weeye hanti Qaran.
Maal-gelinta shisheeyaha ee dalka gudahiisa Dawladdaa damaanad qaadaysa; xeer baana lagu nidaaminayaa. Samaynta khamriga iyo beerista ama ka ganacsiga iyo isticmaalka maandooriyuhu geyiga Somaaliland way ka reebban yihiin. Awoodaha kale ee ku xusan Dastuurka iyo xeerarka kale. Ciidamda Booliska iyo Asluubta.
Tusmada Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland. This was followed by the first Somaliland constitution, which was adopted at the conference of the Somaliland Communities in Hargeisa in February Kal-fadhigiisa ugu horreeya Golaha Guurtida waxa uu ku ansixinayaa xeer hoosaadka Golaha.
You are commenting using your Facebook account. Waxyaabaha ka Reebban Madaxweynaha. This page was last edited on 7 Julyat Qiimo-weynida nolosha qofka oo Ia imanaysa sugidda xuquuqda asaasiga ah iyo xorriyadaha qofka.
Ka shaqeysunta carruurtahaweenka, dastuurks saacadaha habeenimo iyo goobaha shaqada, fasaxyada iyo saacadaha shaqada waxaa qeexaya Xeerka Shaqada. Waa inuu jidh ahaan iyo maskax ahaanba gudan karaa xilkiisa 5.
Xeerarka dalka waxaa laga qaadanayaa Shareecadda lslaamka; waxaana reebban wixii xeer ah ee ka soo horjeeda. Khudbadda Qaranka waxa jeedinaya Madaxweynaha kal-fadhiga u horeeya sannad walba, waxayna ka war bixinaysaa: Golaha Wasiiradu waxay Madaxweynaha ka kaalmaynayaan jamhuueiyadda xilkiisa iyaga oo wadajir u go’aamin doona siyaasadda guud, qorshayaasha iyo barnaamijyada Dawladda.
Haddii Golayaasha Baarlamaanku fadhiyaan marka uu xeerarka degdegga ah soo ddastuurka Madaxweynuhu, waa inuu ugu gudbiyo muddo toddoba 7 maalmood gudahood ah si ay go’aanno uga gaadhaan.
Xuquuqda Qofka Xorriyadda laga qaaday Qod. Tirada Golaha iyo Doorashadusa Qod. Doorashada Xubinta Golaha iyo Muddada Xilka. Wax-ka-beddelka ama bedelaadda calanka, astaanta, iyo heesta qaranka, waxa jidaynaya go’aan Golaha Wakulada.
Tirada garsoorayaashu waa inaanay ka yaraan Guddoomiyaha iyo afar garsoore; waxaana nidaaminaya xeer gaar ah. Xubinta Golaha Wakijiada uma bannaana in ay qabato xii kale oo Somalilnad, iyadoo xilkii loo doortay haysa; umana bannaana inay uga faa’iideysato xilkaasi dano gaar ahaaned. Golayaasha Gobollada iyo Jamhuuriyadds. Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland 2- Qod. Dawladda Jamhuuriyadda Somaliland waxay ka soo horjeeddaa falalka argagaxis-nimada iwm, ujeeddo kasta ha lahaadeene.
Uu ku dhaco xukun ciqaabeed kama dambays ah oo maxkamad horteed kaga caddaaday; 5. Ma bannaana kala diridda Golaha Wakulada sannadka u horeeya ee Golaha iyo sannadka u dambeeya ee muddada xilka Madaxweynaha. Dawladdu waxay horumarinaysaa hiddaha iyo dhaqanka suubban ee bulshada, waxayna tirtiraysaa soamliland wax u dhimaya Diinta, horumarka, dhaqanka iyo caafimaadka bulshada.
Constitution of Somaliland – Wikipedia
Qof kastaa waxa uu xaq u Ieeyahay in uu si gaar ah u yeesho hanti, taas oo ay shardi tahay in uu ku helo waddo xalaal ah. Waxa reebban in qofka lagu dirqiyo qirasho dembi, marag furid, ama dhaar. Waxaa xilka ka qaadi kara madaxda qodobkan ku dastuueka Madaxweynaha oo keliya. Labadi kal-fadhi waxaa u dhaxaynaya ugu yaraan 4 afar toddobaad, ugu badnaana 8 siddeed toddobaad.
Khilaafka Diiniga ah ee abuurma. Waxyaabaha ka Reebban Xubnaha. Haddii uu xukun ciqaabeed oo kama damays ahi ku dhaco. Buuxinta Jagada Golaha Wakiilada. Hay’ad kasta oo ka mid ah hay’adaha Dawladda ee gaarka ah waxa ay yeelanaysaa xeer u gaar ah oo qeexaya qaab-dhismeedkeeda, waajibaadkeeda iyo dhawrsanaanta madaxdooda.
Shaqaalaha dawladdu iyo xubnaha ciidamada qalabka sida waxay xaq u Ieeyihiin gunnada hawl-gabka iyo kaalmada bukaanka ama shilka iyo kaalmada qofka naafooba oo xeerka waafaqsan. Waxa xubintu muddada dastuuriga ah hayn doontaa xilka bo magacaabay; isla markaana waayi doontaa xubinnimadii Golaha Wakiilada.